लुम्बिनी प्रादेशिकअस्पतालमा उपचाररत कालाजारको बिरामीको मृत्यु-Nagarikaawaj.com
बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कालाजारका बिरामीको मृत्यु भएको छ । पश्चिम तराईमा उन्मुलन भइसकेको भनिएको कालाजार कै कारण पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका बल्ढेङगढीकी जीवन रानाको मृत्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेट डा. कृष्ण खनालले जानकारी दिए ।
भैरहवास्थित मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा कालाजार भएको पत्ता लागेपछि उनलाई थप उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल बुटवल ल्याइएको थियो । भुसुनाको टोकाइबाट कालाजार हुने कालाजारको यो क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालमा बाहेक अन्यत्र उपचार हुँदैन ।
यो रोग लागेमा सामन्यता लगातार ज्वरो आउने गर्छ भने फीयो र कलेजोमा संक्रमण बढ्न गई पेट फुल्लिने, कमजोरी महसुस हुनेलगायत लक्षण देखिने डा. खनालले बताए ।
चिकित्सकका अनुसार यो रोग लागेमा रक्तअल्पत्ता हुने, मानिस दुब्लाउदै जाने, फियो धेरै बढ्ने तथा केही समयपछि कलेजो समेत बढ्ने हुन्छ । कालाजार ’लेसमानिया डोनोभानी’ नामक प्यारासाइट प्रोटोजोवाका कारण हुने रोग हो । यो एक प्रकारको सेन्टलाई नामक भुसुनाको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ ।